17 / 12 / 2019 19 / 12 / 2019 Kat 3804 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 75102 ဖိုးရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 75179 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိုက်လေယာဉ်, 75180 Rathtar Escape, ၇၅၁၈၇ BB-75187, 75257 ထောင်စုနှစ် Falcon, Disney, ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း IX, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars 20th နှစ်မြောက်, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု
နှင့် Star Wars: The Skywalker ၏ Rise of the နောက်ဆက်တွဲသုံးရပ်ဆွေးနွေးပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ Brick Fanatics အကောင်းဆုံးငါးရွေး Lego အပိုင်း VII - IX အပေါ်အခြေခံပြီးအစုံ
ဤသည်နှစ် ဦး စလုံးအဘို့အရှည်လျားအောက်မေ့တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည် Lego နှင့် Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲ IX နှင့်အတူပရိသတ်များ - The Rise of Skywalker သည်နောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးချက်များသာမကတစ်ခုလုံးကိုနိဂုံးချုပ်သည်။ Star Wars ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အနှစ် ၂၀ မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စစ်ကိုင်း၊ Lego Star Wars.
၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းက Star Wars- ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် The Force Awakens သည် Lego အုပ်စုတွင်ပစ္စည်းအသစ်များများစွာရှိပြီးပုံမှန်နေရာများနှင့်ယာဉ်များမှပန်ကာ - အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များ၏ statuettes အထိအစုံအမျိုးမျိုးသို့အသွင်ပြောင်းထားသောပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ အုတ်တံတိုင်းရှိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအချို့ကိုထပ်မံဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ Brick Fanatics ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းပြန်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသောအကောင်းဆုံးနောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာစုံငါးခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
75102 ဖိုး X-Wing တိုက်လေယာဉ် (Star Wars: The Force နိုးထ
X-wing တိုက်လေယာဉ်များသည်မူလစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်၏အထင်ကရသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Poe Dameron's T-70 သည်အပြန်အလှန်ထိန်းညှိနိုင်ခဲ့သည် classic Starfighter နှင့်ချောမွေ့ပြောင်လက်သောသင်္ဘောအသစ်။ ၏အကောင်းဆုံးဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ 75102 BB-8 ၏ astromech slot နောက်ကွယ်၌ဝှက်ထားသောဖုကိုလိမ်။ ဖွင့်လိုက်သော S-foils အဖြစ် 'split' ပြုလုပ်ရန်လိမ္မာပါးနပ်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအင်ဂျင်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစုသည်ထူးခြားသောအနက်ရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်အရောင်အဆင်းနှင့်အတူအထူးသဖြင့်မီးခိုးရောင်အကွာအဝေးသို့အံ့သြဖွယ်အရောင်ဖြည့်စွက်သည်။ 75273 ဖိုး Dameron ရဲ့ X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်.
၇၅၁၈၀ Rathtar Escape (Star Wars: The Force နိုးထ
တည်နေရာရှားပါးအတွက်အပန်းဖြေနေကြသည် Lego Star Wars အဖြစ်အရှက်ကွဲသောဆောင်ပုဒ် 75180 သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြတယ်။ ဤသည်လျှောတံခါးများနှင့်ဝှက်ထားသော comp အဖြစ်ကစား - features တွေနှင့်ပြည့်စုံပျော်စရာအစုံပါပဲartရုံရုပ်ရှင်၌ရှိသကဲ့သို့, ments ။ ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းများ၏အသေးအဖွဲများသည်အသုံးပြုထားသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Rathtars ၏ပါးစပ်များနှင့်အမှန်တကယ်ကိုက်ညီသည် Lego နှင်တံ, tentacles နှင့်သွားအပိုင်းပိုင်းစုံလင်ရန်။ ပရိတ်သတ်များကဤအစုံကိုလည်းအလွယ်တကူ Erevana ၏မြောက်မြားစွာခန်းမ recreating ၏ထို option နှင့်အတူအလွယ်တကူပြန်လည်နိုင်ပါတယ် အစုံ၏မျိုးစုံမိတ္တူကိုဝယ်ကြလော့.
Brick Fanatics ငါးရွေးတယ် Star Wars Ultimate Collector Series ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည့် Trilogy များနောက်ဆက်တွဲယာဉ်များ
75179 Kylo Ren ၏ TIE တိုက်လေယာဉ် (Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi)
TIE Silencer သည်မျက်နှာပြင်အချိန်သိပ်မရသော်လည်း၊ 75179 သင်္ဘော၏ထူးခြားသောဓားမြှောင်အတောင်ပံများကိုအံ့သြဖွယ်ပြန်ဖွင့်သည်။ ဒီမော်ဒယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကအားကောင်းတယ် နည်းပညာ လေယာဉ်မှူးနှင့်အတောင်ပံများအကြားဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း၊art။ တကယ်တော့ဒီအစုနှင့်အတူအသေးစားပြissuesနာများတစ်ခုမှာယာဉ်ပျံအတွင်းမှာသင်္ဘောပျံသန်းဖို့ထိန်းချုပ်တဲ့ panel တစ်ခုမှမရှိဘူး။ Kylo Ren ကအင်အားကြီးမားတဲ့အင်အားသုံးတဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် Solo ရဲ့သားတောင်မှ Joystick လိုတယ်။
75187 BB-8 (၊Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi)
ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောပတ် ၀ န်းကျင် droid BB-8 ကိုဂျီ ometric မေတြီမှပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုမည်သူကထင်လိမ့်မည်နည်း Lego အုတ်လား 75187 အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်အချို့ကိုကြာပါသည် 75159 မရဏစတား သို့သော် BB-8 ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကွေးနေသောပုံသဏ္recreာန်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်သေးငယ်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့်ပြုလုပ်သည် Lego မျက်လုံးများတပ်ဆင်ထားသော Droid ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုမျက်စိဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည့်ရေဒါဟင်းလျာများ BB-8 သည်အပြင်ဘက်တွင်ကြည့်ကောင်းရုံသာမကအတွင်း၌ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်တောက်ပသည် နည်းပညာ ဘေးဘောင်တစ်ခုလှည့်သောအခါသူ့ကိုလက်မထောင်အောင်လုပ်နိုင်သည့်ယန္တရားသည်အလွန်သေးငယ်သောအတွက် Porg နှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည်။
Brick Fanatics သူ၏ကလေးငယ်ကို“ Baby Yoda” တည်ဆောက်ရန်အတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်
75257 ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက် (Star Wars: Skywalker ပေါ်ပေါက်လာခြင်း)
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ Han Solo ၏အချစ်ဆုံးအငွေ့အသက်များထဲမှအသေးစားပုံစံအရွယ်အစားငါးခုရှိခဲ့သည် 75257 ဒီစကေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောထောင့်မှန်ပြားအသစ်များနှင့်အတူအပြင်ဘက်ပြားများကြားရှိအရုပ်ဆိုးသောကွာဟချက်များမရှိတော့ပါ၊ ရှေ့ mandibles နှစ်ခုလုံးသည်ပိုမိုတိကျသောအရှည်ရှိပြီးလေယာဉ်မှူး၏တည်နေရာကိုပင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အသစ်စက်စက်ယိုယွင်းနေသော Lando Calrissian အသေးစားရုပ်ပုံအသစ်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်များအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက်တိုင်အပြောက်ကိုဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပရိသတ်တွေကသူတို့နောက်ထပ်ထောင်စုနှစ် Falcon မလိုအပ်နိုင်ဟုထင်သည့်အချိန်တွင်၊ 75257 လာတယ်…
ဤစာရင်းသည်ထိပ်ရှိရွေးစရာများဖြစ်နိုင်သည် Brick Fanatics အဖွဲ့, ဒါပေမယ့်တိုင်း Lego Star Wars ပန်ကာသည်၎င်းတို့၏အကြိုက်ဆုံးနောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာကိုလုံးဝကွဲပြားသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်articular မြင်ကွင်းတစ်ခု, ဇာတ်ကောင်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝတစ်ခုခု။ နောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာ၏နိဂုံးသည်သက်ဆိုင်မှုအတွက်အဆုံးမဟုတ်ပါ Lego စုံ (ရုံဇန်နဝါရီလလှိုင်းမှာကြည့်ပါ) နှင့်အပိုင်း IX: The Rise of Skywalker သည်လှုံ့ဆော်မှုပမာဏကိုသာတိုးပွားစေသည် Lego ဒီဇိုင်နာများပြီးသားရှိသည်။
Star Wars: Rise of Skywalker ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။
← Lego ခရစ်စမတ်ထွန်းပြက္ခဒိန် 2019: ဒီဇင်ဘာ ၁၈
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Gingerbread Stock →